Ithegi: uphando lwentengiso | Martech Zone
Ithegi: uphando lwentengiso
Yintoni intengiso yemidiya yoluntu? Ndiyazi ukuba oko kuvakala ngathi ngumbuzo wokuqala, kodwa kufanelekile ukuba kuxoxwe. Kukho imilinganiselo emininzi kwisicwangciso esiliqili sentengiso yemidiya yoluntu kunye nobudlelwane bayo obunxibeleleneyo nezinye iindlela zesitayile ezinje ngomxholo, ukukhangela, i-imeyile kunye neselfowuni. Masibuyele kwinkcazo yentengiso. Ukuthengisa sisenzo okanye ishishini lokuphanda, ukwenza izicwangciso, ukwenza, ukukhuthaza kunye nokuthengisa iimveliso okanye iinkonzo. Imidiya yokuncokola yi
Ukuba ukhe wenza uphando kwaye unethemba lokufumana iziphumo zobungakanani kunye nomgangatho kwiimpendulo, uyaqonda ukuba kunzima kangakanani ukubuza imibuzo. I-verbiage, ulwakhiwo kunye negrama oyibuzayo kungakhokelela kwiziphumo eziza kukhokelela kuphando oluphosakeleyo. Njengomphathi wemveliso, ndabalekela kule kakhulu ngamaqela ekugxilwe kuwo. Ukuba bendivavanya ujongano lomsebenzisi omtsha, ukubuza ingxelo kunokwenza ukuba umamkeli ajonge ujongano
I-Toluna Start is a agile, end-to-end, real-time platform intelligence intelligence. Iimveliso zibonelela ngombono wabathengi, uphando lweemarike, kunye nokuxhobisa abathengi ukuba baqhube ngokukhawuleza ubungakanani kunye nomgangatho wophando ngexesha lokwenyani. Ngokungafaniyo namaqonga ophando emarike, iToluna idibanisa zombini itekhnoloji efunekayo kunye nokufikelela kuluntu lwehlabathi ukubonelela ngolwazi oludingayo. I-Toluna Start Nokuba yinto entsha ye-agile yokuphuhliswa kwemveliso okanye uphawu lokuvavanya kunye nemiyalezo yonxibelelwano, iToluna ineqonga lobukrelekrele babathengi lokunceda
NgoLwesithathu, Septemba 2, 2020 NgoLwesithathu, Septemba 2, 2020 Douglas Karr
Idatha yomlilo enokubonelelwa yimidiya yoluntu ayimiselwanga kwaye kunzima ukufumana ulwazi olunentsingiselo kuyo ngaphandle kolunye uhlobo lobukrelekrele. UBirdie uguqula izigidi zezimvo, uphononongo kunye nezinye iincoko ezikwi-intanethi zibe kukuqonda okusebenzayo, okusebenzayo okunceda amaqela ezentengiso ukuba enze izigqibo ezikhawulezayo nezisebenzayo. IBirdie liqonga lokuqala elipheleleyo le-AI-based Insights-as-a-Service (IaaS) yeqonga eliyilelwe ngokukodwa ukunceda iimveliso zeCPG ezinje ngeSamsung kunye neP & G ukuqonda izigidi zabaphengululi, ukuguqula